१५ बैशाख २०७५ |
काठमाडौंकी प्रिया सिग्देल प्रतियोगिताकै सबैभन्दा अग्ली प्रतिस्पर्धी हुन् । प्रतियोगि नम्बर–८ प्रिया ५ फिट ९ इन्च अग्ली छिन् । २३ वर्षीया प्रियाले डेभलपमेन्ट स्टडिजमा स्नातक गरेकी छिन् । सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सक्रिय प्रिया गैरनाफामूलक संस्था हात्तीहात्तीकी सञ्चालिका समेत हुन् । उनी महिनावारी–स्वच्छतासम्बन्धी अभियन्तासमेत हुन् ।
सिग्देलले स्विट्जरल्यान्डमा सम्पन्न ग्लोबल चेञ्ज मेकर फोरम तथा बंगलादेशमा सम्पन्न यूथ एक्सचेञ्ज कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छिन् । नृत्य तथा यात्रामा रुचि राख्ने प्रियाले सफल सामाजिक अभियन्ता बन्ने लक्ष्य लिएकी छिन् ।
कसरी यति अग्ली हुनुभयो ?
वंशाणुगत गुणले होला । बुवा नै अग्लो (६ फिट) हुनुहुन्छ, हजुर बुवा पनि उत्तिकै अग्लो । त्यसबाहेक परिवारमा आमा, बहिनी तथा भाइ सबै अग्लै छौं ।
अग्लो हुनुका फाइदा तथा बेफाइदा के–के पाउनुभयो ?
पहिले–पहिले त निकै गाह्रो भएको थियो । असनतिर सपिङ गर्न जाँदा धेरै पटक सिलिङमा टाउको ठोक्किएको छ । मानिसहरूको बारीमा आलु फल्छ, मेरो चाहिं तालुमा धेरै पटक आलु फलेको छ । अग्ली भएकै कारण सुन्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका टिका–टिप्पणीले मलाई टेन्सन नै हुन्थ्यो ।
कस्तो टिप्पणी ?
अधिकांशले एउटै कुरा दोहोर्‍याउँथे– ‘आम्मामा, यति अग्ली ? यति अग्ली केटीले बिहे गर्ने केटा त पाउँछे ?’ यस्ता टिप्पणीले मलाई आफ्नै उचाइप्रति दिक्क लगाउन थालेको थियो ।
मिस नेपालमा कसरी आउनुभयो ?
मिस नेपालमा भाग लिन मभन्दा पनि मेरा अभिभावकहरू बढी उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । म अग्ली भएकै कारण परिवारका सबै जना मैले मिस नेपालमा भाग लिओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । यसपटक समय र अवसर जुरेकाले सहभागिता जनाएँ ।
अडिसनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अडिसन अलि अनौठो रह्यो । त्यहाँ युवतीहरूको भीड देखेर डर पनि लाग्यो, छनौट हुँला कि नहुँला भन्ने थियो । अडिसन छोटो थियो । त्यसक्रममा मसँग मेरो दाँतका बारेमा जिज्ञासा राखियो, मैले दाँतलाई मिलाइरहेकी छु भनें । त्यो लेभलमा मेरो दाँतका बारेमा चर्चा होला भन्ने मैले कल्पनै गरेकी थिइनँ । त्यसकारण पनि मैले अडिसनलाई अनौठो भनेकी हुँ ।
प्रशिक्षण कस्तो रह्यो ?
प्रशिक्षणमा मैले विश्वकै बारेमा जानकारी हासिल गरौंला भन्ने सोचेकी थिएँ, ठिक विपरीत मैले आफ्नै बारेमा पो थाहा पाउने मौका पाएँ । त्यसक्रममा मैले आफ्ना बारेमा सचेत हुने तरिका सिकें । आफू के बोल्दैछु, आफू कत्तिको जिम्मेवार छु जस्ता कुरा सिकाइयो । प्रशिक्षणले हामी आफैंलाई हाम्रो अनुहार देखाउने ऐनाको काम गरेको अनुभव भयो । त्यसक्रममै प्रतिस्पर्धीहरूबीच घुलमिल हुन पाइयो ।
ट्यालेन्ट शोमा स्ट्यान्ड अप कमेडीको कन्सेप्ट कसरी आयो ?
मलाई स्ट्याण्ड अप कमेडी असाध्यै मन पर्छ । म नेपालका सन्दिप क्षेत्री तथा भारतका जाकिर खानलाई फलो गर्छु । उनीहरूले गर्न सक्छन् भने मैले किन सक्दिन् भनेर ट्यालेन्ट शोमा हल्का रमाइलो गरिदिएको हो । त्यसक्रममा मैले आफ्नै हाइटका बारेमा कुरा गरेकी थिएँ ।
मिस नेपाल अर्थका रूपमा आफ्नो नाम घोषणा हुँदा के गरिरहनुभएको थियो ?
म त अरू नै कसैको नाम आयो भनेर ताली पो पिटिरहेकी थिएँ । छेउकी साथीले ‘तँलाई बोलाएको हो, जा भनेपछि मात्र म अघि बढें ।’
मिस अर्थ–२०१८ को तयारी थाल्नुभयो ?
फिलिपिन्समा हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि तयारी प्रारम्भ गरिसकें । अघिल्ला वर्षका प्रतियोगिताहरूको फुटेज हेर्दैछु । नेसनल कस्ट्युम, इको भिडियो जस्ता विषयमा ध्यान दिन थालिसकेकी छु । यसअघिका मिस नेपाल अर्थहरूसँग भेटेर उहाँहरूका अनुभव पनि ग्रहण गर्नेछु ।
प्रकाशित मिति १५ बैशाख २०७५, शनिबार १७:०३